एमाले भेलाका सहभागी के भन्छन्? - Nepal Readers
Home » एमाले भेलाका सहभागी के भन्छन्?
एमाले भेलाका सहभागी के भन्छन्?
नेकपा (एमाले) नेपाल–खनाल पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाका सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण पार्टीमा समस्या आएको बताएका छन् । उनीहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण अवसर ओलीले गुमाएको पनि बताए ।
भेलामा सहभागी हुन आएका धनुषाका रामलखन महतोले वरिष्ठ नेता नेपालको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन एकताबद्ध हुने विश्वास लिएका छन् । बुधबार बिहान सात जनाको समूहमा गाडी रिजर्भ गरेर काठमाडौँ आइपुगेका महतो भ्याएसम्म साँझै फर्किने तयारीमा थिए । तर, भेला आज पनि जारी रहने भएकाले के गर्ने भन्ने अन्योलमा देखिन्थे । महतोले राजनीति बुझेदेखि नै एमालेमा लागेको बताए ।
अध्यक्ष ओलीलाई साथ नदिएर किन माधव पक्षको भेलामा आउनुभएको ? भन्ने प्रश्नमा उनले नेता नेपालले लिएको सही विचार नै मुख्य कारण भएको बताए । उनले नेपालको कार्यकर्तामैत्री स्वभाव र आफ्नो चिनजानलाई पनि कारण देखाए । ‘हाम्रो नेता हो माधव कमरेड । उहाँ हाम्रो गाउँघरमा गइरहनुहुन्थ्यो । व्यक्तिगत रुपमा पनि राम्रो चिनजान छ,’ महतोले अगाडि भने,पार्टीलाई अलि गहिराइले हेर्ने र सँधै जनताको हितमा काम गर्ने उहाँको शैली मलाई मन पर्छ, त्यसैले पनि मलाई यहाँ आउन प्रेरित गरेको हो ।’
महतोको जस्तै बुझाइ छ अर्का कार्यकर्ता डिल्लीराम दाहालको । नेता नेपालले लिएको विचारले आफूलाई छोएको उनले बताए । तल्लो तहका कार्यकर्तासँग घुलमिल हुने नेता नेपालको स्वभावका कारण आफू नेपाल पक्षमा खुलेर लागेको दाहालले बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि लगातार गलत काम गरेकाले जनता र कार्यकर्तामा निराशा छाएको पनि बताए ।
‘जनता र आम कार्यकर्ताको अपेक्षाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न सक्नुभएन । उहाँले एकपछि अर्को गलत कदम चालेर जनतालाई निराश बनाउनुभयो । त्यसैले अब पार्टीलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन नेता नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्छ,’ उनले भने । दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णय गलत भएको बताए । उहाँको कदमलाई अदालतले गलत पुष्टि गरिदियो । उहाँले अदालतको समेत सम्मान गर्नुभएन,’ मजदुर नेतासमेत रहेका दाहालले भने, ‘अदालतको सम्मान गर्न नसक्नेले किसान,मजदुरको कसरी सम्मान गर्छ ?’
अनेरास्ववियु नेतृ आरती लामाले पनि भेलामा उलेख्य संख्यामा नेता–कार्यकर्ता सहभागी भएकाले उत्साह थपिएको बताइन् । उनले गण्डकी,लुम्बिनी र प्रदेश २ बाट सबैभन्दा बढी कार्यकर्ता आएको बताइन् । भौगोलिक अवस्था र छोटो समयका कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भने तुलनात्मक रुपमा कम सहभागी रहेको जानकारी दिइन् ।
बुधबारदेखि शुरु भएको भेलामा देशभरबाट चार हजार बढी कार्यकर्ता सहभागी भएका छन् । सानेपास्थित हेरिटेज प्लाजामा जारी भेलामा सातै प्रदेशबाट करिब ५ हजार कार्यकर्ता उपस्थित भएको केन्द्रीय सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिइन् । पन्तका अनुसार भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू, केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय सदस्यहरू,प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी,जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी,संघ तथा प्रदेशका सांसदहरू, समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख,स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सहभागी छन् ।
उनका अनुसार सहभागी सबैलाई खाने र सुत्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिहीबार दिनभरको कार्यक्रमपछि कतिपय प्रतिनिधि साँझबाट आफ्नो जिल्ला फर्कने छन् ।
ट्रम्पजस्तो राष्ट्रपति हुनु अमेरिकाका लागि लज्जाको विषयः आयातोल्ला खामेनी